LG G7 ThinQ သည်လူကြိုက်များသော Notch ကိုလောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည် Gadget သတင်း
ယခုနှစ် ၂၀၁၈ အတွက် LG ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တရား ၀ င်ကိုတရားဝင်ပြသလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ LG G2018 ThinQ ဒီမော်ဒယ်ဟာလက်ရှိဒီဇိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည် - အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ - နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ Artificial Intelligence ကိုဓာတ်ပုံကဲ့သို့သောကဏ္inများတွင်ပြသခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်အသံကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုခြင်းဖြစ်သည်.
ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်သော်လည်းအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အထင်ကရနေရာများကိုစျေးကွက်သို့အမြဲတမ်းကြိုဆိုကြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ LG အနေဖြင့် LG V30 အကွာအဝေးအပေါ် မူတည်၍ စျေးကွက်အများစုဖြစ်သော G စီးရီးများထက် ပို၍ အလောင်းအစားပြုလုပ်လိုပါသလားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။။ သို့သော် LG G7 သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးကွက်တွင်ရရှိမည့်ကောင်းမွန်သောအခြားနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အသုံးပြုသူအားမည်ကဲ့သို့အံ့အားသင့်စေမည်ကိုမသိရှိတော့ပေ။
ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ LG G7 ThinQ သည်ကြီးမားပြီး terminal တစ်ခုဖြစ်သည် ၆.၁ လက်မထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင်နိမ့်ဆုံးသို့ frames များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရှေ့ကင်မရာနှင့်မတူညီသောအာရုံခံကိရိယာများတည်ရှိမည့်မျက်နှာပြင်ထိပ်ရှိပုံမှန် Notch ကိုလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှာပြောရရင်၊ LG က၎င်း၏ OLED panel တွင်လောင်းသည် V30 အကွာအဝေး ပြီးတော့ LG G7 ThinQ မှာ LCD ရိုးရာကိုဆက်လက်အသုံးပြုထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာ resolution မြင့်တဲ့ QHD + (3.120 x 1.440 pixels) ရှိလိမ့်မည်။
အတွင်းပိုင်းတွင်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုမလုံလောက်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်မှပြီး။ Qualcomm Snapdragon 845 ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။4သို့မဟုတ်6GB RAM ပါတဲ့ CPU။ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရတာလဲ ကောင်းပြီ၊ အရာအားလုံးသည် LG G7 ThinQ တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့် internal memory ပေါ်မူတည်သည်။4GB သည် 64 GB ရှိသည့် internal space နှင့် version တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး RAM6GB သည် 128 GB သိုလှောင်နေရာနှင့်ဗားရှင်းနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မည်။
1 ဓာတ်ပုံနှင့် Artificial Intelligence သည် LG G7 ThinQ နှင့်လက်ချင်းချိတ်ထားသည်
2 လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် LG G7 ThinQ ၏ဒုတိယပြောဆိုချက်ကိုမြည်ပါ
ဓာတ်ပုံနှင့် Artificial Intelligence သည် LG G7 ThinQ နှင့်လက်ချင်းချိတ်ထားသည်
ဒါပေမယ့်အစပိုင်းမှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ Artificial Intelligence တို့အတူတကွလက်တွဲသွားမှာပါ။ LG နှင့် Google တို့အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပုံရသည်။ Google Assistant နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတိုးတက်ခဲ့သည် ဤ LG G7 ThinQ သည် Google Lens ကိုပထမဆုံးပေါင်းစပ်သောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ကောင်းပြီ၊ ကိုရီးယား terminal ၏ကင်မရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုအရတော့ဘေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသီးသန့်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ထားလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Google ရဲ့ virtual assistant ကိုသုံးလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်ဒီ LG G7 ThinQ တွင် dual-megapixel 16-megapixel တပ်ဆင်ထားသည် သူတို့တစ်ခုချင်းစီ - သင်သိ, bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာအများအပြားရွေးချယ်နိုင်ပြီးစမတ်ဖုန်းကိုယ်တိုင်ကသင့်အားအကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုပေးအပ်ရန်တာဝန်ယူလိမ့်မည်။
ရှေ့ကင်မရာမှာတော့ resolution ကတော့ 8 megapixels ပါလိမ့်မယ်။ လူကြိုက်များမှုကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်နေမှာပါ selfies အသုံးပြုသူများအကြားပိုမိုအသုံးပြုသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်
လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် LG G7 ThinQ ၏ဒုတိယပြောဆိုချက်ကိုမြည်ပါ
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ el စမတ်ဖုန်း ဂီတ၊ podcast စသည်တို့အတွက်အဓိကကစားသမားဖြစ်လာသည်။ ဆက်ကပ်အပ်နှံကစားသမားအိုးအိမ်မဲ့ပြောင်းရွှေ့အပေါ်။ ထို့အပြင်နားကြပ်များ၏စျေးကွက်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးကုမ္ပဏီများစွာသည်ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ဗားရှင်းများကို ဆက်၍ လောင်းနေကြသည်။
စဉ်တွင်, LG က ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်ဖောက်ချင်တယ် အခြားကုမ္ပဏီများကစွန့်ခွာရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ဒီ audio jack မှတဆင့် 7.1 channel output ကိုရနိူင်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, LG G7 ThinQ သည်ဈေးကွက်တွင်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်သည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် Virtual 3D အသံကိုပေးစွမ်းနိုင်သော DTS-X နည်းပညာ အကြောင်းအရာအားလုံးနှင့်အသံအတွက် built-in HiFi အသံချဲ့စက်ရှိပါတယ် ဆု high-end နားကြပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အများအားဖြင့်ဤရွေးစရာကိုလူအများကြားတွင်နားထောင်ခြင်း၊ သူစိမ်းများနှင့်ပွင့်လင်းသောနေရာများတွင်များသောအားဖြင့်ဤရွေးစရာကိုမထောက်ခံပါ LG G7 ThinQ သည်၎င်း၏ internal space ကို soundboard အဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကွန်ပျူတာ၏စတီရီယိုစပီကာနှစ်လုံးသည်နားကြပ်မပါဘဲအသံကိုသာမန်အရည်အသွေးထက်မြင့်သောအရည်အသွေးဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
El LG G7 ThinQ ကိုတောင်ကိုရီးယားသို့စတင်မည် နှင့်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဥရောပကဲ့သို့သောအခြားစျေးကွက်များကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အခုအချိန်မှာအတိအကျရက်စွဲများနှင့်အများကြီးလျော့နည်းညွှန်ပြစျေးနှုန်းမရှိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » LG G7 ThinQ သည်လူကြိုက်များသော Notch ကိုလောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည်